Ny Monument Valley dia vatosoa azo alaina ao amin'ny Play Store | Androidsis
Monument Valley, piozila entanin'ny geometry tsy azo tanterahin'i Escher, tonga amin'ny Android
Iray volana mahery lasa izay Lazainay ny fahatongavan'ny iray amin'ireo firavaka ireo avy amin'ny Androidsis izay indraindray miseho amin'ny Android ary anio fotsiny dia tsy maintsy ankafizintsika izany amin'ny farany. Ary tsy iza izany fa Monument Valley, lalao video izay efa tao amin'ny iOS hatramin'ny volana aprily lasa teo efa misy azo vidiana ao amin'ny Play Store.
Iray amin'ireo lalao video sarotra apetraka amin'ny teny ny dikan'izany, ary tsara kokoa hatrany ny mitsapa any situ mba hahafantarana izay resahina rehefa voatonona ireo teny Monument Valley. Amin'ny ankapobeny dia hiatrika piozila isika, saingy amin'ny zavatra hiseho ihany, satria ny Monument Valley dia lalao video izay manana zavakanto betsaka ao anatiny, manambatra geometry manokana sy tsy azo atao aingam-panahy avy amin'ny sanganasan'i MC Escher, ary miaraka amin'ny sary tsy azo antoka sy minimalista izay hahatonga antsika handany ny iray amin'ireo fotoana majika sy tsy miasa madiodio matetika ataontsika amin'ny lalao video manokana sy manokana, dia tokony holazaina fa sarotra kokoa ny mahita azy ireo.
Monument Valley mametraka anao amin'ny anjara asan'ny Ida, andriambavy mangina izay manomboka amin'ny zava-miafina manaitaitra amin'ny alàlan'izao tontolo izao izay hitondra anao amin'ny dia tsy dia misy fotony mahafinaritra sy geometry tsy azo atao. Raha mpankafy ilay mpanakanto Marius Escher ianao dia azo antoka fa ho anao ity lalao ity.
Ny familiana an'i Ida dia tsy maintsy entinao mamakivaky ireo tranomaizina samihafa sy saro-pantarina hamahana azy ireo ary hamakivaky labyrint tsy azo atao, izay tamin'ny voalohany dia toa tsy nisy lalana hivoahana, fa amin'ny fahefana manova sy manova singa maritrano Avelan'izy ireo hanohy ny diany ilay andriambavy mangina.
Amin'ny voalohany dia ho mora ireo piozila mampitombo ny fahasarotany rehefa mandroso isika. Angamba ny iray amin'ireo kileman-toetra vitsy ananan'i Monument Valley dia ireo ambaratonga vitsy ao aminy, tsy manana mihoatra ny 10. Ary, na dia toa vitsy aza izy ireo ary afaka ora vitsivitsy dia hamita ny lalao ianao, miomàna, satria manantena anao izy ireo ora vitsivitsy mialoha fa andro.
Monument Valley dia ao amin'ny Play Store amin'ny vidiny 3,59 €. Lalao video tsara tarehy sy manokana izay afaka lasa tonga lafatra amin'ny singa tsara indrindra noforonina tamin'ity taona 2014 ity, ary na ho an'ny finday finday sy ny takelaka misy anao aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Monument Valley, piozila entanin'ny geometry tsy azo tanterahin'i Escher, tonga amin'ny Android